Global Voices teny Malagasy » Eo An-tànan’ny Governemanta Azerbaijani, Lasa Fampahafantarana Mitondra Ny Mariky ny Firenena Ilay Tantara Noforonina Be Mpankafy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Desambra 2016 8:15 GMT 1	 · Mpanoratra Eurasianet Nandika Tantely
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Azerbaijan, Zeorzia, Mediam-bahoaka, Politika, Sarimihetsika, Tantara
Sary fampahafantarana ilay lahatsary Ali sy Nino. (sary: IFC Films).
Lahatsoratra fiaraha-miasa avy tamin'ny EurasiaNet.org  nosoratan'i Arzu Geybullayeva  ito manaraka ito. Naverina nalefa rehefa nahazoana alàlana.
Nankafizina hatry ny ela ilay tantara noforonina Ali and Nino (Ali sy Nino) noho ilay tantaram-pitiavana misy kolontsaina mifangaro manohina tokoa ary ny fanehoany ny tànanan'i Kaokazy manankarena sy be fahasarotana. Fa tamin'ny famadihana vaovao ilay boky ho sarimihetsika– novokarin'ny zanaka vavin'ny filohan'i Azerbaijan – maro amin'ireo fahasarotana ireo no nohamafisin'ny fitantaràna iray narahina akaikin'ireo sarisary ankafizin'ny governemanta tamin'izy io.
Ali and Nino, nosoratan'ilay solonanarana hoe Kurban Said ary navoaka ny taona 1937, milaza ny tantaran'ilay Azei Silamo, Ali sy ilay Zeorziana Kristiana, Nino, izay nifankatia tany Baku nandritra ny Ady Lehibe Voalohany raha potipotika ny fanjakana Rosiana ary nitolona ho amin'ny fahaleovantenany i Azerbaijan.
Tamin'ny fanovàna ilay izy ho sarimihetsika anefa, nasiam-panovàna tsirairay daholo ireo singa maro ara-tantara tao amin'ilay tantara noforonina– tafiditra amin'izany ny andraikitr'i Rosia, ny Armeniana, ary ny Shiita. “Na teo aza ny fanarahana tsara ny datin'andron'ny tantara, nasiam-pikitihana ihany ireo pitsopitsony mba hanehoana ny hatsaram-pon'ny governemanta. Ka izany no antony tsy afaka hilazàna io hoe sarimihetsika tsy mitanila,” hoy i Altay Goyushev, mpahay tantara sady manampahaizana fantabahaka malaza ao Azerbaijan, tamin'ny tafatafa niaraka tamin'ny EurasiaNet.
Famokarana iraisampirenena ilay sarimihetsika, notarihin'i Asif Kapadia, Britanika nahazo ny amboaran'ny Oscar ny taona 2016 tamin'ny fanadihadiany, Amy. Adam Bakri, Palestiniana, no milalao an'i Ali ; ary i Nino kosa nolalaovin'ilay Espaniôla Maria Valverde. Tsy iadian-kevitra ny fidikidiran'ny fanjakana Azerbaijane tamin'ilay sarimihetsika, na vitsy tamin'ireo antsipirihany ihany aza no naboraka.
Leyla Aliyeva, zanaka vavin'ny filoha Ilham Aliyev, no lehiben'ny mpanatontosa ilay horonantsary, izay nolazaina ho nitentina 20 tapitrisa dolara ny nanaovana azy. Nalefa voalohany nampahafantarina tao amin'ny Ivontoerana Koltoraly Heydar Aliyev ao Baku io, ary ny Vadin'ny Filoha Mehriban Aliyeva – izay filohan'ny Fondation Heydar Aliyev ihany koa – no anisan'ireo mpikambana ao amin'ny fianakavian'ny mpitondra tonga nijery ilay fandefasana voalohany. Taminà fandraisam-pitenenana taorian'ny fandefasana ny sarimihetsika, nisaotra an'i Leyla Aliyeva ny mpamokatra Kris Thykier, izay nilaza fa raha tsy nisy azy, “tsy nisy mihitsy ilay sarimihetsika.” Nisaotra ny Fondation Heydar Aliyev ihany koa i Thykier noho ny fanampiany tamin'ny fandraketana ny sary ary ny Ministeran'ny kolontsaina sy ny Fizahantany. Nanindrahindra be ilay sarimihetsika tamin'ireo media sosialy ireo tomponandraiki-panjakana Azeri, ary niteny  tao amin'ny fandefasana voalohany tao New York ny masoivohon'i Azerbaijan any Etazonia, Elin Suleymanov.
Nanova ny ampahany manandanja sasany tamin'ny tantara araka izany ilay sarimihetsika, mba hifanaraka bebe kokoa amin'ireo ezaka ataon'i Azerbaijan hanehoana ny mariky ny firenena .
Ny ady anatin'i Ali no tena safotofoto betsaka asehon'ny fihenjanana mampientanentana ao amin'ilay boky, Ali torotoro eo antenantenan'ny fitiavany ny fombandrazana Azeri sy ny fototra mpiady Silamo niaviany etsy ankilany, ary ny fitiavany an'i Nino, Eorôpeana zanaka mpanjaka, etsy andaniny.
Any amin'ny fanombohan'ny boky, ohatra, manome torohevitra ny zanany lahy mikasika ny fianakaviana sy ny fanambadiana ny rain'i Ali: “Aza adino mihitsy: ianao no mpitondra ary izy miaina ambany alokao. … Raha mila torohevitra ianao, ary manome io ho anao izy, manaova zavatra tena mifanohitra amin'io. Angamba izay no tena zavatra lehibe tsara ho fantatra.” Taty aoriana, nandray anjara tamin'ny fetibe Shia Muharram i Ali, izay tokony hampijaliana tena; hitan'i Nino tampoka izy ka nantsoiny hoe “fanatika barbariana.”
Noesorina tao amin'ny sarimihetsika daholo ireo ampahan-tantara ireo, sy ny zavatra rehetra misy fiahiahiana fisianà “barbarisma,” .
Ny iray amin'ireo fotoana vitsy ahafantarana an'i Azerbaijan ho fanjakana Silamo ao anatin'ilay sarimihetsika dia nandritra ilay ampahany nisy paikady ara-politika, raha nilaza izao ilay mpikatroka mafana fo ho an'ny fahaleovantena, Fatali Khan Khoyski: “Tsy tena tsara tokoa ve raha isika no voalohany lasa fanjakana Silamo demokratika ?” Nanaiky i Ali, nilaza fa tokony hiasa hanamboatra “firenena maoderina, mandroso” izy ireo. Tsy misy ao anatin'ny boky ireo andalany rehetra ireo, fa kosa samy maneho ny mariky ny fanjakana ao Azerbaijan .
Resahana amin'ny fomba samy hafa ihany koa ny fifandraisan'i Azerbaijan amin'i Rosia. Raha mitsikera ny revolisiôna Rosiana ilay boky – ary vokatr'izany tsy novakiana tany amin'ny Firaisana Sovietika – tena ratsiratsy kokoa ny nanehoana an'i Rosia tao anatin'ilay sarimihetsika. Ao amin'ny voalohandohan'ny sarimihetsika, milaza i Ali hoe tsy tokony hiady ho an'ny tafiky ny “tsar” (mpanjaka) izy amin'ny Ady Lehibe Voalohany, satria “nobeazina hisaina lalandava hoe ampahan'i Rosia isika, kanefa tsy izany. Nanafika antsika izy 100 taona lasa izay ary naka ny fahefan'ny fianakaviantsika. Firenena nobodoina isika.” Tsy miseho ao anatin'ny boky ireo andalana ireo. Toy izany ihany koa, namorona ampahan-tantara ilay sarimihetsika, izay nahitàna ireo naman'i Ali roa nanjohy ny tafika ary nompain'ireo tomponandraikitry ny tafika Rosiana, ary niteny hoe nanenina niditra tamin'ilay tafika izy ireo.
Naseho amin'ny lafiny tokany kokoa ihany koa tao anatin'ilay sarimihetsika ilay Armeniana tena miseho matetika. Raha toa izy samy aseho ho olona ratsy toetra ao amin'izy roa, nanandrana naka an-keriny an'i Nino sy hanambady azy tao anatin'ny boky, dia sady naman'i Ali hatry ny ela ihany koa ary mpiaro ny fifangaroan'ny kolontsaina ao Kaokazy. Ao amin'ny sarimihetsika kosa, anefa, miditriditra amin'ny fiainan'i Ali izy mba hangalatra an'i Nino, ary manompa tsy ahoan-tsy ahoana an'i Azerbaijan: “Tsy misy zavatra azo avy amin'ny tany efitra.”
Ny singa iray ao amn'ny horonantsary izay tena nampisy tsikera teo amin'ireo mpijery tao Azerbaijan dia ny fomba anehoany ny tolonn'ireo Azeri mitady fahaleovantena. Natao vatan-dehilahy vitsy monja mirenireny manerana ny firenena, mitifitra ireo fahavalo fotsiny sisa ilay hetsika fikatsahan'i Azerbaijan ny fahaleovantenany sy nandraisan'i Ali fitaovam-piadiana.
Nanitatra ny anjara asan'i Khoyski ihany koa ilay sarimihetsika, olona izay lasa minisitry ny raharaha ivelany taorian'ny nanambaràna an'i Azerbaijan ho repoblika mahaleotena, ny Oktobra 1918. Tamim-pahadisoana no nilazan'ilay sarimihetsika ilay teny malaza hoe “Raha vantany vao nasandratra ny sainam-pirenena, tsy hianjera intsony” ho nolazain'i Khoyski, izay ny tena marina dia nolazain'i Mammad Amin Rasulzadeh, filoha voalohany sady ny hany filohan'ny Repoblika Demokratikan'i Azerbaijan nandra-pahafatiny ny Aprily 1920. Tsy hita ao anatin'ny boky io andalana io raha ny marina, fa mifanaraka amin'ny fihetsehampo feno fankahalàn'ny governemanta ankehitriny azy ny fanilihana an'i Rasulzadeh ao; ny antoko politikany, Musavat, no nisava làlana ny iray amin'ireo antoko mpanohitra ao Azerbaijan izay vitsy ankehitriny, ary ataon'ny ankamaroan'ireo mpanohitra ao Azerbaijan ho olona mahery fo i Rasulzadeh.
Fony vao nivoaka ilay sarimihetsika, nibitsika  rohy hamerenana hijery  an'i Ali sy Nino izay nosoratany ny taona 2000 i Suleymanov, izay ambasadaoron'i Baku any Washington ankehitriny. Tamin'izany famerenana nijery izany, natahotra i Suleymanov fa raha atolotra olona izany, “tsy dia ho raharahiana ny tena fotokevitr'ilay boky aorian'ireo fitsaràna apetraka ankehitriny, ny fahita matetika hoe mifandona ny kolontsaina raha toa ka tokony hifanaraka.”
Voaporofo ilay fampitandremana; ho an'ireo mpanaraka iraisampirenena, lasa nahatonga fandraisana tsy dia nisy fankasitrahana firy ny fanovàna ilay boky ho lasa karazana fandaharana fampahafantarana an'i Azerbaijan maoderina. Toy izao no filazalazàna ilay sarimihetsika  avy amin'ny Variety : “tsikombakomba sy fampisehoana, navoaka tamin'ny alalan'ny fifamalian-dresaka amin'ny teny Anglisy tsy hay hazavaina tsy misy maminy zara raha misy poezia, tsy ahitàna na inona na inona afa-tsy soritra lohahevitra ara-kolontsaina, miralenta ary ara-tantara izay zara raha nahasintona kely hijerena azy.” Namarana  izao ny Los Angeles Times: “Tsy misy resaka alsimia na fihetsehampo mihitsy amin'io sarimihetsika io, tonga dia azo novinaina mialoha ny ezaka natao, fofompofon'izay zavatra tena tokony ho izy fotsiny.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/12/22/92661/
 Lahatsoratra fiaraha-miasa : http://www.eurasianet.org/node/81126
 maneho ny mariky ny fanjakana ao Azerbaijan: http://en.president.az/articles/11948
 hamerenana hijery: http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/82_folder/82_articles/82_ali_nino.html
 ilazalazàna ilay sarimihetsika: http://variety.com/2016/film/reviews/ali-and-nino-film-review-sundance-1201698450/